30 Shabakado dhiirrigelin ah oo ku saabsan Codsiyada iPhone | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan u maleynayaa inaan horey kuugu sheegay munaasabado kale in badan oo iPhone iyo iPad codsiyo ah ay leeyihiin bogag aad u wanaagsan marka la eego naqshadeynta shabakadda, waana taas sababta waqti ka waqti ay ugu habboon tahay in iyaga dib loogu eego si loo dhiirrigeliyo dhiirrigelintayada.
Boodka ka dib waxaa jira 30 in la soo aruuriyay ilaa iyo WebDesignLedger si guul leh, xulashada bogagga codsiyada gabi ahaanba ka duwan midba midka kale oo leh qaabab aad u kala duwan, laakiin dhammaantood leh hal dabeecad oo guud: iyagu si fiican ayaa loo qaabeeyey.
1 Cajiib ah
2 Hoos u dhaca
3 Kaameeraha +
7 Task Tani
11 Halkan, Faylka Faylka!
13 Miisaanka Lite
18 $ taabasho taabasho
21 Gaashaanka Mushahar
22 ecoki akhristaha iPhone
25 Ogeysiis Cajiib ah
26 Midabka qulqulka
29 Habeen istaag HD
30 Mouse Mouse
Tallaabo kor u qaad, fadhiiso, oo diyaar u noqo inaad isku duba rido inta badan saaxiibbadaada intii suurtogal ah. Qolka sawirku wuu soo noqday, waana wax cajiib ah.
Decrescendo waa muusig yar oo muusig ah oo loogu talagalay inuu kuu seexdo iyadoo sameecadaha dhagaha weli ku xiran yihiin!
Haddii aad tahay sawir qaade xilliyeed ama qof si dirqi ah u taabtay kamarad, Camera + ayaa kaa dhigi doonta inaad ku jeclaato sawir qaadista.
La kulan isdhexgalka, aakhirka aaladda & aaladda loo yaqaan 'prototyping tool' oo si toos ah ugu socda iPhone-kaaga. Iyada oo loo yaqaan 'Interface' waxaad ku abuuri kartaa & horay ugu arki kartaa shaashadaha mockup-ka mashruucaaga iPhone adoo adeegsanaya koontaroollada macruufka ee hooyo.
Uruurinta ugu weyn ee had iyo jeer sii kordheysa ee qorshooyinka cuntada ee dhadhan iyo doorbid kasta.
Wadooyinku waa barnaamij iPhone, iPod taabasho & iPad ah oo kuu oggolaanaya inaad qorsheyso jidadka noocyadooda oo dhan si dhakhso leh, qurux badan & fudud. Xitaa waad la wadaagi kartaa jidadka qof kasta oo isticmaala kombiyuutar awood u leh ama taleefan.
U maaree hawlahaaga hab fudud, Task Tani waxay soo jeedineysaa in lagu abaabulo mashaariic iyo qeybaha, laakiin sidoo kale la abuuro liisas wax lagu kala iibsanayo si loo maareeyo waxyaabahaaga.
Darajooyinku waxay ardayda tusaan waxa ay u baahan yihiin inay ku dhibcayaan shaqooyinkooda soo socda, imtixaannada, iyo finalka si loo helo buundada ay doonayaan.
Barnaamijka Basecamp ee loogu talagalay dadka wax qabadka sameeya.
Bowtie oo loogu talagalay iPhone waa ka soo horjeedka barnaamijka Apple ee Remote: Bal ka soo qaad in aad fadhido qolkaaga aad degantahay, dhageysatidna iPhone-kaaga oo isku shaandheyn ku sameynaya dadka kugu hadla ee cusub, marka hees aanad jecleyn soo baxdo.
Halkan, Faylka Faylka!
Weligaa file ma u baahan tahay intaad banaanka joogto Halkan, Faylka Faylka waa barnaamij iPhone ah oo kuu oggolaanaya inaad marin ugu hesho dhammaan faylasha gurigaaga Mac, meel kasta oo aad tagtid.
Barnaamijka ToDo ee adduunka ugu bilicsan uguna wanaagsanaa waxaa loogu talagalay inuu farahaaga ka shaqeeyo.
Ogaanshaha waxa aad miisaamayso kuma filna. Miisaanka Miisaanku waa kaaliyahaaga miyir-qabka ah ee dareenkaaga. Gali miisaankaaga maalin kasta oo hel fudud oo sahlan oo aad raacdo talooyinka ku saleysan xisaabinta shaqsiyadeed ee xoogga badan.
"Miiskayga", waxaad ku maamuli kartaa liistada waxa-qabashada, kalandarka, iyo ballanta maalinlaha ah, dhagayso muusikada iyo sawirrada aad jeceshahay oo hubi xaaladda batterigaaga isla markaana akhri twitter-ka hal mar.
Borange waa barnaamij iPhone ah oo lagu wadaago goobta iyo helitaanka. Isticmaal Borange markaad rabto inaad asxaabta ku soo wacaan ama kula kulmaan. Eeg cidda rabto inay kula soo xiriirto oo aad naftaada u hesho qof ama koox kasta oo ku jirta buugga cinwaankaaga.
Weligaa ha seegin kulankaaga subaxnimo, ama idaacadda aad jeceshahay, meel kasta oo aad ku safarto. TimeTuner® waxay kuu oggolaanaysaa inaad digniintaada u dejiso mid ka mid ah in ka badan 30,000 oo idaacado caalami ah, heesta aad ugu jeceshahay, ama liiska muusigga ee iPod.
Weightbot waa barnaamij fudud oo lagu raad raaco miisaanka oo ka dhigaya maareynta miisaanka madadaalo! Kaliya gal miisaankaaga maalin kasta oo arag isbeddelladaada oo lagu sawiray garaaf qurux badan.
$ taabasho taabasho
Dakhli fudud iyo raadin kharash ah oo loogu talagalay iPhone.
Ego wuxuu ku siinayaa hal meel dhexe - oo qurux badan - goob aad ku hubiso tirakoobka shabakadda ee adiga kugu habboon. Waxaad si dhakhso ah u daawan kartaa tirada booqashada websaydhkaaga (oo ay ku jiraan lambarrada maalinlaha ah, saacad iyo bille ah), quudinta wadarta rukummada iyo isbeddelada, imisa qof ayaa kugula socda Twitter iyo in ka badan.
iShots waa matoor toogasho aan kala sooc lahayn loogu talagalay cabitaanka aan go'aansaneyn laakiin xiisaha leh. Cajiib oo ku raaxeeyso asxaabtaada adoo muujiyaya dhankaaga Irish.
PayShield waa habka ugu awooda badan ee marin loogu helo koontadaada PayPal. Waxay ku saleysan tahay Aqoonsiga PayPal API waxaana laga heli karaa adduunka oo dhan.
ecoki akhristaha iPhone
Ku raaxayso subaxda koob shaah cagaaran ah iyo Ecoki iPhone Reader!
Google Reader, jeebka ayaa le'eg.
Keypoint waa aaladda ugu fiican ee lagu abuuri karo bandhigyada socdaalka. Waxaad u isticmaali kartaa mid ka mid ah 10-ka mawduuc ee tayada sare leh iyo 7 animations si aad u abuurto bandhig cusub waqti aan dheereyn.
Ogeysiis Cajiib ah
Ugu dambeyntiina, isku dar qoraalada hal-ku-dhigga hal barnaamij! Ku abaabulo noloshaada maanta Qoraal Cajiib ah, oo bilow inaad sameyso tirinta labaad kasta.
Ugu dambeyntiina, barnaamij midab leh oo dareemaya inuu kula shaqeynayo halkii aad ka soo horjeedsan lahayd! Haddii aad ku shaqeyneyso midabbo maalinle ah, ama xitaa haddii aad ku raaxeysato inaad fiiriso oo aad midabbo abuurto, abkan ayaa kuu ah adiga.
Soo helitaan muusig oo ku saleysan niyaddaada, oo laga heli karo meel kasta oo adduunka ah.
iStudiez Pro wuxuu yimaadaa UNIVERSAL oo loogu talagalay iPhone / iPod iyo iPad. Taas macnaheedu waxa weeye waxaad bixinaysaa oo kaliya nooca iPhone-ka isla markaana shatiga ayaa si otomaatig ah ugu faafaa iPad-ka, taa bedelkeedana! Hal liis gudahood waxaad kuheleysaa laba nooc oo ah 'iStudiez Pro', mid walbana si gaar ah ayaa loo qaabeeyey oo u shaqeeya asal ahaan labada qalab.
Habeen istaag HD
Iyadoo la taagan yahay 'Night Stand HD' oo loogu talagalay iPad-ka, waxaan u qaadannay waxyaabahayaga ugu fiican ee loogu talagalay iPhone-ka waxaanan dib u dhisnay wax walba oo ka soo bilaabanna dhulka: dib-u-habeyn dhammaystiran oo muuqaallada ah, xakamaynta iPad-ku habboon, hab cusub oo saacad adduunyo cusub ah iyo waqtiyo si macaan loo farsameeyay oo aadan si fudud u awoodi doonin hel meel kale.
Isla markiiba u beddelo iPhone-kaaga ama iPod taabashada jiir hawo, trackpad, iyo wireless wireless kombuyuutarkaaga! Dib u fadhiiso oo soco shabakadda, caleenta maktabadda sawirkaaga ama ka xakamee qalabkaaga muusikada raaxada sariirtaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 30 Shabakadaha dhiirrigelinta ah ee ku saabsan barnaamijyada iPhone